Kwado, ezi ego GPS centimita ziri ezi - Geofumadas
Ọktoba, 2012 GPS / Equipment, topografia
Na nso nso a, e gosipụtara ngwaahịa a na nzukọ ESRI na ndị Spain, naanị n'izu gara aga, nke a ga-esokwa na TopCart nke Madrid.
Ọ bụ usoro ọnọdụ GPS na mmụba nke na-akwado nhazi nhazi, nke enwere ike inweta nkenke centimita. Ọ dịghị ihe sistemụ ndị ọzọ anaghị eme, mana ihe dọtara uche anyị bụ ọnụahịa ahụ.
N'ụzọ bụ isi, ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị ka osisi logger. A na-ejikọ antenna mpụga ya na ya ma na-enweta nha anya dị nro na satellites na faịlụ ndị a na-ebudata site na USB na kọmputa. Ọ na-akwado data sitere na isi, ụzọ na polygons, maka nke ikpeazụ ọ na-agbakọ mpaghara.
O nwere oke nke iPod, nke dị nnọọ mfe, nke mere na ọ nwere ike ibute ya n'akpa ma ọ bụ tinye ya na Velcro na okpu ahụ nke gụnyere, ka ị wee nwee ike iji aka gị mee nha na aka gị.
Ihe dị iche na nke a, site na logger omenala, dị ka nke a na-eji ugbo ala (igbe ojii), bụ na a na-edekọ nchịkọta dị iche iche na ndị nwere ike imechaa nhazi.
N'otu aka ahụ, GPS nchọgharị naanị na-ejide ọnọdụ, na nzi anya n'etiti 3 na 5 mita ma enweghi ike iwelie mma.
Ihe data ebudatara na kọmputa ahụ bụ faịlụ ndị nwere nha nke nha nke satellites (pseudorange na carrier phase), ewezuga ozi NMEA. Ọbụna na-enweghị nhazi nhazi, izi ezi nke NMEA dị mma karịa nke ụdị ọkọlọtọ na-achịkwa GPS, ebe antenna mpụga na-ebelata oke mkpọtụ.
Ihe nkọwa nwere ike nweta
Tụkwasị na nke ahụ, Mee ka ị nweta ọrụ nhazi, ebe ọ bụ na ezigara ozi a weghaara ma lọghachite na edozilarị na ọnọdụ dị iche iche gbasara ebe ndị na-anọchite anya GPS.
Ihe nkpebi ndi a puru ime bu:
20 ka 30 centimeters maka nbughari nha
2 ka 3 centimeters maka nhazi stic
Ihe nkenke ntanetị sitere na 2 ruo 3 ugboro bụ nkenke doro anya.
Data na-abịa na kml na formatsfile. Na mgbakwunye, ozi metụtara ọrụ nhazi, n'ihe gbasara otu kml, nke ọ bụla na-echekwa ozi dịka ohere ya, ịdị ogologo na ogo / nkeji / sekọnd na usoro ntụpọ. Ọzọkwa ellipsoidal na orthometric elu, UTM nhazi, ọnụ ọgụgụ nke anya Satellites na-eme atụmatụ nkenke mgbe post-nhazi.
Ego ole ka ọ dị
Posify na-efu 326 Euro, gbakwunyere ụtụ isi, na mkpokọta gbasara 395 Euro. Nke a gụnyere:
Posify logger. Onye a na - eji kaadi micro SD nke 4 GB, nke nwere ike ịchekwa ihe ruru 1,300 awa nke edekọ edeghị ede.
Batrị lithium nke dị n'ime batrị na-akwado ruo oge 12 ma jiri ụgwọ na 4 awa.
GPS na-enweta data na oge L1 ruo n'ọwa 50, na ọnụọgụ abụọ UBX / NMEA koodu na usoro ọ bụla.
Otu antenna mgbochi mpụta nke nwere eriri 1.50, njikọ SMA.
Ngwongwo isi ihe dị mma nke anten, na 10 cm. na dayameta.
USB / Micro-USB USB
An «Army» okpu ya na velcro iji buru antenna na velcro ọzọ
Ekwunyeghị chaja USB, n'ihi na n'ihi na ị nwere ike iji chaja ọ bụla nke anyị ji n'aka nwere ọtụtụ aka ekpe maka ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla anyị zụrụ.
Maka usoro post ị na-akwụ 99 Euro kwa afọ. Afọ mbụ bụ n'efu, dịka a gụnyere ya na ịzụta akụrụngwa.
Ihe na-agaghị adị
Ọ bụ ihe kwere nghọta na ngwaọrụ ahụ bụ onye natara data. O nweghị ihuenyo iji gaa nchọgharị dịka a na-eji ya eme ihe. Ọ bụ ezie na ị na-atụle na ugbu a ọ bụla mobile nwere GPS wuru, ihe ndị nwere ike ịmasị.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya nyefee ozi na ozugbo na Smartphone.
Ewezuga ndekọ mmesho faịlụ na disk dị n'ime, Posify logger na-enye ezigbo oge gbasara satellites site na ọdụ ụgbọ USB. Ozi a (data) gụnyere koodu na nha nke akụkụ, yana ozi NMEA site na ngwọta ọkọlọtọ GPS. A na-emepụta data USB (nha na ozi NMEA) n'otu ọnụego dịka ndekọ faịlụ (nke abụọ ọ bụla). A na-eme data USB na-adịgide adịgide n'agbanyeghị ma logger ahụ na-edekọ oge mmachi ma ọ bụ. Nke ahụ bụ, ozugbo ejiri logger ahụ gbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri USB na-ewepụta mgbe niile.
Nke a nwere ọtụtụ ngwa enwere ike, jikọta logger na laptọọpụ ma ọ bụ ọnụ ọnụ mkpanaka (PDA, smartphone):
N'iji anya nke ihu igwe nke kpakpando GPS na ihuenyo (si NMEA ozi)
Ntughari ederede na komputa (ebe ntinye aka)
Ịdị na ozugbo (Real Time Kinematics or RTK)
Ọgụgụ na-egosi ngosipụta nke satịlaịtị GPS ozugbo na ekwentị ama. Ngwa ahụ na-enye ihe ọmụma banyere ọnụọgụ satellit ndị a na-ele, azimuth na elu ha, na ike nke akara ha. Ọ dịkwa mma ile anya na DOP (Dilution Of Precision), nke bụ uru nke na-egosi jiometrị nke kpakpando GPS: obere DOP ahụ, geometry nke satellites dị mma maka ịkwado ziri ezi.
Ebee ka ọ dị?
Ugbu a naanị maka Spain. Ọ na - arụ ọrụ ihe dịka ọdụ ụgbọ elu GPS 180 gbasara gbasara ọtụtụ Spain. Netwọk ahụ gụnyere ọdụ nke National Geographic Institute (IGN) na nke ọtụtụ n'ime obodo ndị kwụụrụ onwe ha
Mee ka ọrụ dị na ndị ọrụ Spanish usoro ETRS89, dị iche iche na mpaghara longitude. N'elu ịdị elu, a na-enye ọnụahịa ellipsoidal (ellipsoid GRS80) na orthometric ma ọ bụ na-aba uru n'elu larịị (gọọmentị EGM08-REDNAP)
O yiri ihe na-adọrọ mmasị, nke a ga-agbaso n'ihi na anyị ga-amatakwu banyere ha.
Previous Post«Previous Georeferencing nke ime obodo
Next Post GeoConverter na-esonye n'ime NjikọNext »
51 na-aza "Posify, ọnụ ala GPS centimita ziri ezi"
Aquileo Cruz Paulino kwuru, sị:
April, 2018 na
M SITE MEXICO MA M BỤ NA POSIFY 2.0
Amador kwuru, sị:
Gịnị mere Posify? Ọ ka na-ere ahịa? Ndi weebụsaịtị nke njikọ n'elu dị na nwube? Enwere m mmasị ịzụta otu ngwa. Onye ọ bụla mara ebe ọ bụla ọ ga-ezite m?
Michel kwuru, sị:
April, 2017 na
Ekele ma gbaa izu ma ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị maka ire ere na Mexico, ma ọ ga-amasị m nkwenye nke GPS maka nyocha nke cadastral nke nkenke
Jaime Jarquin kwuru, sị:
biko ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ihe ọmụma ebe ịzụta ya, ana m achọ 2 ruo ọtụtụ afọ ma enweghị m ike ịchọta ihe ọ bụla, naanị nkọwa ndị na-enye nkọwa, ma ọ bụ ya bụ troll ????
SEBASTIAN JUSTRIBO IHE kwuru, sị:
Jenụwarị, 2017 na
Hello Javier, M ga-enwe mmasị ma ọ bụrụ na ị nwere ike igosi m otu esi enweta POSIFY n'ihi na anaghị m ahụ ebe m ga-aga. M na-azụta otu ozugbo na ikekwe nke abụọ. Ọtụtụ ndị na-atụ anya ekele
RAUL DE LA PEÑA BORDA kwuru, sị:
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ inweta nke a (GPS) Ntopụta maka izizi, ọnụahịa nke ihe omume maka usoro nzipu ego ole ọ na-efu, ma e wezụga usoro post na-akwụ ụgwọ 99 Euro, ma ọ bụrụ na enweghị m ọrụ maka ọnwa 6. Dị oke ọnụ.
Ọ ga-adọrọ mmasị ịnweta 20 na 30 cmt. Mkpoko na-enweghị usoro post. Ire ya ga-enwerịrị na Lima Peru. Daalụ
Pedro kwuru, sị:
A mechiri emechi Mezie ?????? Enweghị m ihe ọ bụla
Juan Carlos Cubero kwuru, sị:
maka Central America kpọmkwem na Costa Rica, na-atụ anya inyere anyị aka ebe ndị nnọchianya na-achọ ịzụta ngwá ọrụ GPS.
Alejandro Ruiz Valencia kwuru, sị:
dị ugbu a na Colombia ma nwee ndị nnọchiteanya?
Domingo Fernandez kwuru, sị:
Ezigbo Javier de Lázaro.
Enwere m mmasị ịzụta ngwaahịa ahụ.
Ị nwere ike ịgwa m ebe ị nwere ike ịzụta?
Nata ekele ekele.
Marco Gómez Del Valle kwuru, sị:
Ezigbo Javier de Lázaro Enwere m olileanya na ị nwere ike ịgbatị ya na Chile.
Ọ na-akpali mmasị iji ya iji nyochaa njirimara ihe onwunwe na iji mee ihe na geology (explorations), dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
M ga-enwe ekele na-egosi otú m nwere ike isi zụta ya na mgbe ọ ga-adị na Chile.
jaime kwuru, sị:
biko achọrọ m ozi maka mexico,
Francisco Correa Nieto kwuru, sị:
December, 2015 na
Kedu ọganihu dị ruo ugbu a (Disemba - 2015)
Leo kwuru, sị:
February, 2014 na
M na-ahụ na ejikọta na smartphone nwere ike ịrụ ọrụ na RTK, ya mere anyị nwere ike igosi egwu? Nhọrọ nke a ga-abụ 20 ka 30 cm?
N'ihe dị iche iche, ole mgbe ka anyị ga-anọ na isi iji nweta 2 ziri ezi na 3 cm?
Neptali Arteaga kwuru, sị:
Ekele ekele.- N’inwe mmasị, anyị chọrọ ya maka ọrụ topographic. Dika anyi no n’etiti 2013. M ga-enwe obi ekele ịkọ maka ihe enwetara ruo taa, maka ojiji GPS Dabere na Latin America. Ọ bụrụ na enwere ike zụta ya na Quito Ecuador site na Nlele.
Echere m na gps fosy dị ezigbo mma. Ọ ga-amasị m ịma ụdị enwere maka Colombia, ma ọ bụ mgbe ọ ga-adị na mpaghara a. Daalụ nke ukwuu maka ozi gị.
kwusi akwa kwuru, sị:
Dị oke mkpa maka akwụkwọ topography n'ihi nrụgide ha nwere mgbe ha dị anyị.
kwusi porles bazalar
M na-arụ ọrụ na topography na: Ibarra, Imbabura, Ecuador.
M ga-abụ ezigbo uru ngwá ọrụ dị ka GPS Mee.
M ga-enwe ekele maka ịgwa gị otu esi enweta ihe ndị ahụ.
Marcelo Conejeros kwuru, sị:
Ha ga-ekpuchi Chile?
Javier de Lázaro kwuru, sị:
Eziokwu ziri ezi bụ obere. Na Spain, iwu nke 50 cm ma anyị enweghị ike ikwu ihe ga-eme na Peru.
Echere m na na azịza mbụ anyị zara ajụjụ ahụ. Njikọ. Banyere inweta site na mba nile, eziokwu anyị ga-ele anya nke ọma n'ihi na e nwere ọtụtụ omenala na anyị achọghị ka nnyefe ngwá ọrụ kwụsịrị site na usoro. Anyị ga-anakọta enyemaka site na Geofumadas maka nkọwa a.
N'oge ọ bụ naanị na Spain. Ma, nyere ọnụ ọgụgụ nke Argentina si Mexico, anyị na-arụ ọrụ n'izu ndị a na nyocha nke mbipụta Poszi. Kwenye 2.0 ga-ekpuchi mpaghara ahụ dum. Ọ ga - enwe nhazi abụọ:
Mee ka 2.0 guzosie ike naanị: otu ọrụ ahụ ị nwere ike inye ngwọta na njehie mpempe akwụkwọ anyị na-atụ na 50 cm. Ọ ga-efunahụ onwe ya n'ihi na ngwọta agaghị adị ruo otu ụbọchị gasịrị.
Mee ka 2.0 base tinyere logger: na nke a, ị ga-achọ PC ejikọrọ na Ịntanetị nke a ga-ejikọta ngwa ngwa 2.0. Ozugbo e debere akara ngosi a ma debanye aha na usoro anyị, enwere ike iji Ntinye ọzọ a iji nyocha ya na njehie mbụ. Usoro a zuru oke dị oke ọnụ ma na-enye ohere ịnweta oke ihe dị elu karị.
Anyi na - amu ihe oru ad-hoc maka ihe eji eme n'ime obodo.
Anyị na-atụle na nhazi abụọ ahụ ga-adị na mmalite nke 2013 na ikekwe na January.
Anyị na-atụ anya na n'ụzọ dị otú a anyị na-ekpuchi mkpa niile e gosipụtara na ihe ndị a.
Enwere m olileanya na anyị azawo na okwu gara aga. Ntinye akwụkwọ dị mkpa ma dị oke ọnụ, ma onye ọrụ njedebe ga-abụ obere ọrụ karịa ime ya site na aka ha. Anyị na-enwe ọhụụ ọ bụla site na ndị ọzọ na-emepụta ihe na-efu.
Echere m na na azịza mbụ anyị zara mmasị gị. Anyị ga-enwe nkenke ndị dị n'okpuru ala n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na kọntinent ahụ dum ọ bụ ezie na anyị ga-abata na nkenke anyị ga-enweta na Spen ga-adị mkpa nhazi zuru oke.
Enwere m olileanya na okwu gara aga anyị zara ajụjụ ahụ.
N'okwu gara aga m nwere olileanya na anyị azawo ajụjụ a.
Azụtara ya n'ịntanetị. Na njedebe bụ njikọ.
Naanị maka Spain
marcochiriboga kwuru, sị:
biko ọ dị m mkpa ịmara ebe ịzụta ma ọ bụrụ na ọ na-enyere m aka ime katstros ime obodo
Angel Teran kwuru, sị:
N'ihi mkpa nke akụrụngwa, ọ ga-amasị m ka a gwa m mgbe ọ ga-ere ire na mba m, Venezuela?
Roland Hoffman Hernandez Centeno kwuru, sị:
M parese akpali a innobador otu ahụ ga-abụ nnọọ uru n'ihi na nke ala na-eri ọtụtụ inportant bụ centimetric, kwesịrị kesaa mba ndị dị ka nke m Nicaragua, nke ga-abụ nnọọ uru n'ihi persdonas na anyị na-arụ nyocha topographical na-nnọọ uru n'ihi na ọchịchị cadastres.
GEORGE kwuru, sị:
Ọ na-ada na-adọrọ mmasị na ha kwenyere na na Mexico a ụdị ngwaọrụ a ga-akp dị ka nke ọma dị ka oru nkwado na ……… .. ihe na-eme ma ọ bụrụ na na Spain na ha nwere ndị mobilemapper 100 na nwekwara ihe ọzọ na-eri nwere post-nhazi ha kwenyere na Posify ga-eme ya nke ukwuu onyinyo na Nke mbụ maka ọnụahịa akụ na ụba na maka usoro post m na-ekwu ya n'ihi na na Mexico ọ bụrụ na nke a emee ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka Ashtech ga-eme ihe iji nweta ntakịrị ala, nyefee koodu post na usoro sọftụwia….
Ndị okike nke Posify ekwuola na ugbu a ngwaahịa dị naanị maka Spain. Ma na ntinye nke mmeghachi omume Latin American ị ga-achọ n'ezie ịtụle ihe ka ukwuu.
Judas Simon Tadeo Aquino Insfran kwuru, sị:
n'eziokwu na n'eziokwu, amaghị m azịza ya
Ihe na-adọrọ mmasị ga-abụ na Paraguay nwere ebe a ga-eji mee ihe na mba anyị, ọ bụrụ na ọ dị, posobolidad nwere ike iji nnweta ahụ nweta ya.
Echere m na a ga-ebipụta azịza ya.
Manuel Medina kwuru, sị:
Na ọnụahịa ahụ vrs. njirimara ndị ahụ nwere olile anya na n'oge na - adịghị anya ha nwere mmepe dị mkpa m gbakwunye na echiche LA bụ ahịa nwere ike, mee nyocha ngwa ngwa ma hụ
jose suarez kwuru, sị:
Ngwaọrụ a dị ezigbo mkpa, ọ bụ ezigbo enyemaka maka ndị nyocha, ndị na-enwe mkpa kwa ụbọchị iji GPS maka nyocha na mpaghara ndị siri ike ịnweta ọdụm, ana m ekele gị maka ozi ndị ọzọ, ụzọ iji nweta akụrụngwa na-enweghị ihe karịrị tinye onye ozo enyi kwuru goodbye …… ekele. ndụmọdụ. j. amaala. Venezuela
Roberto Ramirez Hernandez kwuru, sị:
N'ehihie ehihie mbụ, m bi na San Jose del Cabo, bcs
Enwere m mmasị na Ime, M chọrọ ịma ma ọ na-arụ ọrụ na mpaghara a
Enwere m mmasị ịmara ọnụọgụ ego ya na pesos mexican ma ọ bụ ọnụ ya na dollar
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka na ntụrụndụ ahụ
Roberto Ramirez n'eziokwu
Javier de Lazaro Torres kwuru, sị:
Ka anyị na-aza César taa, anyị emeela ihe ndị dị mkpa maka Spain. Anyị nwere atụmatụ ịbawanye na mba ndị ọzọ dị ka Dominican Republic ma ọ bụ Bolivia.
Anyị nwere ike ime mmepe nke ga - ekwe ka anyị ghara ịtụkwasị anya na e nwere ntọala. Zitere m email ma anyị nwere ike ịmụ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ihe ndị a ga-eme bụ ọtụtụ.
Ọnụahịa ahụ na-egosi na weebụsaịtị anyị
Na-agụnye VAT, mbupu na-akwụ ụgwọ na Peninsula na afọ mbụ nke nhazi usoro ntanetị
Ugbu a ka a na-ekesa na Spain naanị peninsular.
Afọ mbụ nke nhazi nke ntanetị bụ n'efu. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, ị nwere ike ịnọgide na-eji ọrụ ntanetị n'ịntanetị na-akwụ ụgwọ nke 99 € kwa afọ (VAT gụnyere).
Nhazi oge na-agụnye nkwado site email. Enweghị ọrụ nkwado ekwentị.
A na-ezipụ ngwugwu ahụ na ọrụ ngwugwu Blue ngwugwu. Oge nnyefe sitere na 3 gaa n'ụbọchị 5 ahịa.
jorge lacruz kwuru, sị:
Ọ ga-amasị m ịmata ihe ọnụahịa nke igosipụta GPS bụ ekele
Ọ bụ na-akpali ndị amaghị Posify, n'ihi na Colombia na e nwere ọtụtụ ime ime ala na-achọ a obere ihe kpọmkwem topographical nha nke awade Garmin 2 nchọgharị 3 mita na ahụ na-anụ-agaghị ekwe omume ka tụọ na a ngụkọta ebe ma ọ bụ a theodolite . The Guild of Surveyors of Colombia ga-ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị gụọ na a technology na mba anyị.
njikọ nke ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ. kwuru, sị:
o doro anya na ọ na-atụba utm string na m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na ọ dịkwa ọsọ ọsọ na akụkụ ahụ
ma na agbanyeghị, m ga-achọ ịzụta ya na Peru dịka aria ma ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla mgbe m ga-atụ anya ka otu ndị nwere mmasị na m
ọ dị m ka posil ahụ dị mma mgbe ọ ga-abụ na Colombia na ị ga-arụ ọrụ na ya. ekele maka ozi
Daalụ maka nkọwa Javier.
Ka ị na-enwe ọganihu na atụmatụ gị, rịba ya na blog ma ọ bụ na akaụntụ Twitter nke ị nwere, n'ihi na ekwenyere m na ahịa Latin America dị mma ọ bụ ezie na ị ga-ahụ ihe ndị dị iche na Spen, dịka enweghi ihe ndị dị na ya na obere njikọta ụlọ ọrụ.
Ndewo, Juan Carlos.
Nke a dabere na obodo ebe ịnọ na ihe ị nọrọ na ya. Na Latin America, ojiji nke Topcon na Sokkia agbasawo ebe niile.
Enwere ụfọdụ ngwá ọrụ China nke na-abanye, nke dị ọnụ ala ma na-eme ahụmahụ ndị m hụrụ adịghị enweta afọ ojuju n'ihi nkwado na ọzụzụ.
Ndụmọdụ m bụ iche echiche banyere nhọrọ: Leica, Topcon, Sokkia, Geomax ma ọ bụ Spectra. Ọ kachasị ọkachasị na obodo gị maka na ọ ga -adị mfe ịchọta usoro, ma ọ bụ ndị ọrụ aka azụ.
Site na ntinye ị nwere, ị nwere ike ịga asọmpi ma gwa ha ka ha nye gị otu ngwá ọrụ.
Ọ bụrụ na ị gwa anyị mba ị nọ, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị na onye nnọchiteanya ga-enyere gị aka.
taa anyị emeela ihe omume dị mkpa maka Spain. Anyị nwere atụmatụ ịbawanye na mba ndị ọzọ dị ka Dominican Republic ma ọ bụ Bolivia. Enwere ike ịzụta ngwaọrụ ahụ na weebụsaịtị na Spain.
Zitere m email ma anyị nwere ike ịmalite ịmalite ịkwalite Peru maka mba ndị ọzọ.
Juan Carlos kwuru, sị:
Achọrọ m ịzụta ụlọ ọrụ zuru ezu, nke m nwere ike ikwu, akụ na ụba ma dị mma
César Liborio Ortiz Espinoza kwuru, sị:
Mmasị, naanị ihe anyị chọrọ maka ọrụ na mpaghara okporo ụzọ okporo ụzọ (ndị okporo ụzọ) na ndị ọzọ metụtara ya. Na Peru, a na-etolite ọrụ ndị na-eme nnyocha na-ede akwụkwọ na nnukwu ọnụ ọgụgụ na anyị chọrọ ụdị ngwá ọrụ iji melite ọrụ anyị. Agradesco na-ebute n'uche ugbu a ma chọọ ị rịọ ka esi eme ihe iji nweta ngwá ọrụ nke ụdị a na mba anyị, karịsịa na Lima-Peru.